Repoblika Dominikana: Manampy An’i Haiti Mpifanolo-bodirindrina Taorian’ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2018 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Português, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, polski, English
Tamin'ny 5:53 hariva tamin'ny talata 12 janoary 2010 tao amin'ny nosy Hispaniola, nahatsiaro fanina tampoka ny vahoaka satria nihovotrovotra ny tany. Mamely ny horohorontany tamin'izay fotoana izay. Tsy nisy afa-tsy ny tahotra lehibe tao amin'ny Repoblika Dominikanina. Na izany aza, tao Haiti mpifanolo-bodirindrina, izay nisy ny foiben'ny horohorontany, faharavàna tanteraka no nisy satria nahatratra 7.0 tamin'ny maridrefy Richter ny horohorontany. Vao mainka niharatsy ny toe-javatra satria efa ho 6 maily (10 kilaometatra) ambanin'ny tany ny horohorontany, mahatonga ny fahasimbana ho goavana kokoa. Mamaritra io fotoana io tamin'ireto teny ireto ilay bilaogera Dominikana Alf Micstar ao amin'ny Duarte 101 [es]:
Hovitrovitra, horohorontany, hozongozona, tahotra, antsoy araka izay tianao. Omaly, ny Talata 12 Janoary, tamin'ny 6 ora sy 5 minitra hariva, nampahatsiahy antsika indray ny nosy fa mbola mihetsika izy, saingy tsy sombin-tany tsy mihetsika izy, ary tsy mitovy amin'ny fiara ny takelany ary tsy mangataka alalana hihovitrovitra eo no eo ny tany.
Rava sy nangina ny renivohitr'i Haiti, Port-au-Prince, izay miorina 10 kilaometatra miala ny foiben'ny horohorontany. Nirodana ireo tranobe, ary namela olona an'arivony haratra na ho faty, mbola tsy misy ny tarehimarika ofisialy. Tsy misy herinaratra, rano, fifandraisana, ora maromaro no lasa alohan'ny nahafantaran'izao tontolo izao ny fahasimbana nateraky ny horohorontany. Maro amin'ireo sary sy fijoroana vavolombelona ireo no nozaraina tao amin'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter sy Facebook. Manjavozavo ny zava-misy, ary vao mainka niharatsy ny toe-draharaha satria tsy namela mahazo ny verin-korohorontany (replique).
Vokatry ny horohorontany tao amin'ny Repoblika Dominikanina, napetraka ny fanairana ny mety hisian'ny tsunami, ary nanakatona ny kianja ara-barotra tao an-drenivohitra Santo Domingo ny Vaomieran'ny Hetsika Vonjy Taitra (Emergency Operations Commission, COE) ary nandray fepetra tany amin'ireo faritra amoron-dranomasina sy tany amin'ny sisintanin'i Haïti. Ny ampitso vao maraina, niantso fivoriana vonjimaika ny filoham-pirenena Dominikana Leonel Fernández mba hametraka Komitin'ny Fanampiana ho an'i Haiti, izay ahitana fanampiana ho an'ny fahasalamana, rano, herinaratra, foto-drafitrasa, ary ny fanampian'ny miaramila.
Joan Guerrero ao amin'ny Duarte 101 [es] mamintina ny hetsika:
Nanomboka vao maraimbe androany [Alarobia 13 Janoary], nanambatra hery hanangonana fanampiana maha-olona amin'ny horohorontany tany Haiti ny manampahefana, ny orinasa, ary ny tafika Dominikana.
Fiaramanidina mitondra fitaovana fanampiana any Haiti. Sary avy amin'ny Duarte 101, nahazoana alalana.
Nanampy nandefa sakafo sy rano amin'ny tavoahangy ny ekipa Dominikana, ary nandefa traktera mba hanalàna ireo korotan-trano rava. Nampiasaina ny hopitaly ao amin'ny faritanin'i Barahona, sy ny seranam-piaramanidina mba handraisana fanampiana izay hozaraina any Haïti. Nanampy olona maratra maherin'ny 2 000 ny mpiasa avy ao amin'ny COE ary nanampy tamin'ny famerenana ny tolotra finday ny Ivon-toeram-pifandraisan-davitra Dominikana (Indotel). Nandrindra ny tolotra fanampiana ara-pahasalamana ny Vokovoko Mena Dominikanina sy ny Vokovoko Mena Iraisam-pirenena. Toeram-piantsonana ho an'ireo mpitati-baovao vahiny izay tonga hitantara ny zava-misy ihany koa ny Repoblika Dominikanina.
Ankoatra ny ezaky ny governemanta, Dominikana maro no nanatevin-daharana ny hetsika miaraka amin'ireo foibe fanangonana fanampiana, ny hafa kosa nanome fiaramanidina manokana sy fitaovana hafa ho an'i Haiti. Duarte 101 [es] manoratra famintinana fohy momba ny fanampiana ilaina sy ny toeram-panangonana fanampiana manerana ny Repoblika Dominikana.
José Rafael Sosa mamintina hoe [es]:
Nandohalika ny vahoaka Dominikana mba hiangavy fanampiana ho an'i Haiti. Tsy mbola nisy toy izany ny zava-nitranga tany Haïti. Misy ny fanaintainana goavana. Misy ny fijaliana goavana. Mijanona hatreo ny fahasamihafana tsy misy dikany ary tsy maintsy apetraka ny firaisankina, madio sy tsotra, an-kalalahana sy tsy am-pisalasalana. Ity no fotoana tokony hanampiana ny firenena rahalahintsika. Andeha hanome ny tanantsika sy ny fanahintsika amin'ny vahoaka izay tsy mendrika ny hiaritra be tafahoatra.
Dikanteny avy amin'i Eduardo Avila